Faah-faahinta heshiiska uu Theo Hernandez ugu biiray kooxda AC Milan – Gool FM
(Milano) 06 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa faah-faahisay heshiiska ay Real Madrid uga soo qaadatay ciyaaryahan Theo Hernandez.
Milan waxa ay sheegtay in difaacan reer France inuu qallinka ugu duugay qandaraas shan sanadood ah.
Bayaan ay soo saartay kooxda AC Milan oo ay ku faah-faahisay heshiiska ay kula soo wareegtay Theo Hernández ayaa u dhignaa;-
“AC Milan waxa ay ku dhawaaqaysaa inay heshiis kala gaartay kooxda Real Madrid xuquuqda Theo Bernard Franҫois Hernández (Theo Hernández)”
“Difaacan garabka bidix ee reer France ayaa kooxda ugu soo biiray heshiis joogto ah, waxaana uu qalinka ku duugay qandaraas shan sanadood ah oo ku eg 30-ka bisha June sanadka 2024-ka.”
Ciyaaryahankan ku dhashay Marseille 06 bishii October sanadkii 1997-kii ayaa ka soo baxay akadeemiga Atletico Madrid, waxaana safashadiisii ugu horreysay kooxda reer Spain uu u ciyaaray sanadkii 2015-kii.
Xilli ciyaareedkii ku xigay waxa uu Theo heshiis amaah ah ugu dhaqaaqay Deportivo Alavés, isagoo u saftay 38 kulan, isla markaana u dhaliyey kooxdaas labo gool.
Xagaagii 2017-kii, waxa uu u saxiixay Real Madrid waxaana uu u saftay 23 kulan isagoo kula guuleystay hal European Super Cup, hal Spanish Super Cup, hal FIFA Club World Cup iyo hal UEFA Champions League.
Intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii 2018-2019 waxa uu u ciyaaray 28 kulan kooxda Real Sociedad, isagoo u dhaliyey hal gool.
Xirfaddiisa sare waxa uu saftay 69 kulan oo horyaalka La Ligaha Spain ah, saddex UEFA Champions League, 16 kulan oo Copa del Rey ah iyo hal kulan oo ah Spanish Super Cup.
Theo waa difaaca ugu da’da yar ee saftay ugu yaraan 50 kulan oo horyaalka La Ligaha Spain ah tan iyo xilli ciyaareedkii 2016/17.
Klopp oo walaac ku abuuray Liverpool, sababo la xiriira mustaqbalkiisa garoonka Anfield